Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguConstance
Baleka kwizinto eziyinyani ngelixa uhlala kule ndlu ipholileyo kwiihektare ezingama-500 eBrunswick Co., Va. Nokuba ubukele iintaka, ukhwele ibhayisekile, ukhwele intaba, okanye ubuyile ihashe ukhwele iTobacco Heritage trail, okanye ukukhwela inqanawa kwiGreat Creek Reservoir, iTotaro iya kukubonelela ukubaleka okudingayo. Iimayile ezili-9 zeendlela ezigciniweyo kunye neendlela ziyafumaneka ukuba uzonwabele. Kunye namadlelo abahlobo bethu abakhweli-mahashe, iikayak kunye namaphenyane ababhexi nabalobi. Uxolo kunye nokuzimela ngokuqinisekileyo kuya kufumaneka eTotaro.
Le ndlu ingasese ye-700 sqft ibekwe phakathi kwemithi ye-pecan, i-oki enkulu, kunye nemithi yama-apile. Uyakonwabela amashiti aphezulu, izambatho ezipholileyo, impahla yakudala, kunye nomsebenzi wobugcisa wokuqala owongeza kubutofotofo bendawo engqongileyo. Pakisha ipiknikhi kwaye ucwangcise usuku lokuhamba efama, okanye ukuphuma kwiTobacco Heritage Trail. Ungachitha imini kwichibi le-2.5 yeemayile elikwicala elingasemva lefama. Kukho iikayak ezi-2 kunye nephenyane elikhoyo ukuze uyonwabele. Kanye nedlelo elikhuselekileyo labahlobo bethu bamahashe. Ngokuhlwa ungabaleka phantsi kweenkwenkwezi ngaphandle kwezibane zedolophu ngelixa usonwabela umlilo ovulekileyo kwiseti yomlilo.
Silawula amaplanga kunye nezilwanyana zasendle njengomsebenzi. Lo mmandla uneyona ndawo ilungileyo yokuhlala yezilwanyana zasendle, kunye nolawulo olubanzi lwamaplanga ngeenxa zonke. Indawo izolile. Kwaye abantu balungile kakhulu. Ngenxa yokungabikho kwezibane zedolophu, isibhakabhaka ebusuku sikhanyiswa ziinkwenkwezi nenyanga. Ukufikelela ngokulula kumachibi amaninzi kunye neepaki ezininzi kunye neendlela. Ifakwe kwisiqingatha sendlela btwn I85 kunye ne-I95, ngaphandle nje kwe-hwy 58 ibonelela ngendlela ekhawulezayo ukuya kwezinye iindawo. Ezinye izinto ezinomtsalane zalapha ekhaya .... IRosemont Winery, iBuggs Island Brewry, iivenkile zamandulo, iLake Gaston, kunye nokuqhuba kwendlela yangasemva. I-Foodlion kunye nevenkile ye-ABC zikwimizuzu nje emi-5 kude.
Umbuki zindwendwe ngu- Constance
Ndiyafumaneka kwiindwendwe njengoko bafuna. Ukuba banesicelo esikhethekileyo esiza kubanceda bahlale bonwabe ngakumbi ndingaqhagamshelwana nabo ngo-Airbnb okanye ngesms. Ukuba undwendwe lufuna ukuba nonxibelelwano oluthe kratya loluntu ndingakuvuyela ukudlula. ITotaro yeyona ndawo ndiyithandayo.
Ndiyafumaneka kwiindwendwe njengoko bafuna. Ukuba banesicelo esikhethekileyo esiza kubanceda bahlale bonwabe ngakumbi ndingaqhagamshelwana nabo ngo-Airbnb okanye ngesms. Ukuba undw…